More n'ụzọ mmekọahụ na Vatican, ndị uwe ojii nyocha | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ndị uwe ojii ka na-enyocha mmekọahụ gbasara mmekọahụ na Vatican
di Mina Del Nunzio - Eprel 15, 2021
ọzọ mmegbu na Vatican ndị uwe ojii na-enyocha. Il "Pontifical nzuzo", nke kasị elu nke nzuzo na Chọọchị Katọlik, o yiri ka ọ gaghịzi etinye aka n'okwu ikpe nke ndị ụkọchukwu. Mgbanwe a na-ewepụ nnukwu ihe mgbochi gbochiri ndị uwe ojii inyocha mpụ.
Ihe nzuzo Papal Pope Francis kagburu iwu a
Ihe nzuzo Papal Pope Francis lma ọ bụ kagburu iwu. "Yabụ" ihe nzuzo nzuzo ", nke kachasịrị nzuzo nke ụka. Ọ na-egosi na ọ gakwaghị etinye aka n'ihe gbasara "ebubo, ikpe na mkpebi" metụtara ụfọdụ mpụ, Vatican kwuru na nkwupụta. Mmebi iwu ndị a gụnyere ịkwa iko nke iyi egwu ma ọ bụ iji ike eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Mmegbu ụmụaka na ndị na-adịghị ike na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Iwu nzuzo agaghị emetụta ndị na-anaghị ekwupụta ndị na-emegbu ha ma ọ bụ na-anwa ịzobe ikpe. Pope Francis kagburu iwu nzuzo Vatican. banyere okwu ikpe metụtara mmekọahụ na Tuesday na nnukwu mgbanwe nke ụzọ Chọọchị Katọlik si emegbu ndị ụkọchukwu. Kagbuo iwu nzuzo ugbu a na-ewepụ ihe ngọpụ ọ bụla maka ịghara ịkwado. Ndị uwe ojii, ndị ikpe ma ọ bụ ndị nwe obodo ndị ọzọ na-arịọ arịrịọ gbasara iwu.
Mmegbu mmekorita Vatican: ndozigharị nke iwu gbasara mmetọ ụmụaka
Vatican iwu mmegbu ụmụaka ndozigharị nke iwu mmegbu ụmụaka. Na iwu ọzọ, Francesco ọ wusikwara iwu ụka ike banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nke ụmụaka dị ka akụkụ nke nzaghachi nke ụka maka mgbasa nke ihe oyiyi mkparị na ịntanetị. Ogologo afọ n'okpuru nke Vatican na-ahụta onyonyo ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị ka ihe ụmụaka na-akpali agụụ mmekọahụ esiwo na 14 ruo 18 afọ. Fireka Katọlik abụrụla okwu ọjọọ maka mmetọ a na-emetọ ụmụaka na-emetọ ụmụaka nke ndị ụkọchukwu kpagburu ruo ọtụtụ iri afọ ma nke ndị isi ụka dị elu kpuchitere. N'ọnwa Febụwarị, Francis nọrọ na nzukọ ọgbaghara maka nsogbu a ya na ndị bishọp gburugburu ụwa, na-ekwe nkwa mmezigharị na njedebe mkpuchi mpụ ndị ụkọchukwu na ndị isi ụka ndị ọzọ mere.
Akaebe Juan Carlos Cruz
Akaebe:Juan Carlos Cruz, Onye ndu Chileke ekfuru nụ iya. Nwatakịrị a gara parish nke "El Bosque" na Santiago de Chile, onye gbalịrị ịbanye seminarị iji gbochie ndina ụdị onwe ya. N'oge ahụ ọ zutere nna ya - Karadima, ụkọchukwu na-adọrọ adọrọ, enyi ndị ọkachamara nke Chile na ndị otu dị iche iche nke ndị isi ụka. nwata nwoke Karadima na ndi oru ya gbara ya oso ugboro ugboro ma oburu na okwuru maka mmekpa ahu. Ọ ga-agwa mmadụ niile gbasara mmekọ nwoke na nwoke ya. N'ikpeazụ ọ chọtara ike ịkatọ mgbe ogologo oge gasịrị. Ọbụna o degaara ndị bishọp na ndị kadinal akwụkwọ ozi, otu onye n'ime ha gwakwara ya na ikekwe, n'ihi nhazi ya, ọ masịrị ya na mmegbu ahụ.
Ọ bụ Mmụọ Nsọ? Vidiyo gosiri halo nke ihe nsure ọkụ na-esi isi nke Pope Francis